35 Elihu toaa ne nsɛm no so sɛ: 2 “Eyi na wubu no trenee no?Woka sɛ, ‘Meteɛ sen Onyankopɔn.’+ 3 Ampa ara woka sɛ, ‘Mfaso bɛn na wunya?+Mfaso bɛn na ɛwɔ so sen sɛ anka mɛyɛ bɔne?’+ 4 Mɛma wo mmuae,Wo ne wo nnamfo+ a wɔka wo ho no. 5 Ma w’ani so hwɛ ɔsoro,+Hwɛ omununkum+ sɛ ɛkorɔn sen wo koraa. 6 Sɛ woyɛ bɔne a, dɛn na woyɛ tia no?+Na sɛ w’atuatew dɔɔso a, dɛn na ɛyɛ no? 7 Sɛ woyɛ nea ɛteɛ a, dɛn na ɛde ma no,Na dɛn na onya fi wo nsam?+ 8 Onipa te sɛ wo na w’amumɔyɛ betumi atia no,+Na sɛ woyɛ adetrenee a, onipa desani mmom na woyɛ ma no.+ 9 Nhyɛso bebrebe nti wɔteɛm hwehwɛ mmoa;+Nnipa akɛse basa nti wosu hwehwɛ mmoa.+ 10 Nanso wɔn mu biara nka sɛ, ‘Ɛhe na Onyankopɔn, me Bɔfo Kɛse no wɔ,+Nea ɔma wɔto nnwom anadwo no?’+ 11 Ɔno na ɔkyerɛkyerɛ+ yɛn sen asase so mmoa,+Na ɔma yehu nyansa sen wim nnomaa. 12 Wɔteɛm, nanso ommua,+Nnebɔneyɛfo ahantan nti.+ 13 Efisɛ nkontompo de, Onyankopɔn ntie,+Na ade nyinaa so Tumfoɔ no nhwɛ.+ 14 Na sɛ woka sɛ wunhu no a, ɛnde obebu wo dɛn!+Asɛm no da n’anim, enti twɛn no ara.+ 15 Ɔmmɛtwee asõ n’abufuw mu,+Enti ɔmfaa n’adwene nkɔɔ kasa hunu no so.+ 16 Hiob bue n’ano kwa;Ɔkeka nsɛm pii kɛkɛ a nimdeɛ nnim.”+